Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaliyadda iyo Dhalinyarada OYSU ee magaalada Dallas, Texas
Shirkii Jaliyadda iyo Dhalinyarada OYSU ee magaalada Dallas, Texas
Waxaa Jan/21/2012 lagu qabtay shir balaadhan oy soo diyaariyeen jaliyada Soomalida Ogaadeeniya ee magaaladaDallas,Texas. Shirka oo si fiican loo soo diyariyay ayaa waxaa ka soo qeyb galey xubnaha jaaliyadda iyo dhalinyaro badan. Shirka oo muddo dheer socday ayaa laga soo jeediyay khudbado ku saabsan xasuuqa arxan darada ah ee Wayaanuhu uu ku hayo shacbiga Ogaadeniya. Waxaa si fiican looga hadlay arimaha halganka iyo heerka uu marayo hadda iyadoo la’isla qiray in eysan wax nabad galiyo ah ka jiri doonin waddanka Ogadenya ilaa ay xukuumadda dhiigyacabka ah joojiso dhibka lagu hayo dadka rayadka ah.
Waxaa shirka ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada OYSU Marwo Sahra Xusseen. Marwada ayaa ka hadashay sidii ey jaaliyadda iyo dhalintu isaga wada kaashan lahaayen arimaha halganka iyo horumarinta jaaliyadda, xidhiidh koodana u sii adkeyn lahaayeen. Waxeyna kula dardaarantay waalidiinta inay muhiim tahay ubad kooda inay ku bar-baariyaan kuna abuuraan qaddiyada iyo say ugu halgami lahaayeen diintooda, dalkooda iyo dadkooda dulman.
Waxey soo bandhigtay Sahra Xuseen Qorsha Hawleedka (Action Plan) 2012,iyo howlaha badan ee u yaala dhalinyarada iyo jaaliyadda Ogadenia ee Texas, sidii guud ahaanba ay uga dulqaadi lahaayen dadkooda iyo dalkooda gumeysiga. Waxeyna ku celcelisay inaan loo kala hadhin barnaamij halgameedyada ey dhawaan dhalinyaradu soo bandhigi doonaan.
Waxaa kaloo madasha kahadlay Abdinasir Arab oo katirsan gudiga ururka dhalinyarada OYSU Texas. Wuxuu masuulkas ka hadlay shir weynihii ururka OYSU ee sanadkan horaantiisii ka dhacay dalkaGermanyiyo waaya aragnimadii uu ka dhaxlay, isagoo gobtaas ka so jeediyay khudbad ey aad ugu diirsadeen dadweynihi ka soo qeybgalay shirka.
Kulanki jaaliyada iyo dhalinyarada OYSU ee gobalkaTexasayaa ku dhamaaday guul iyo jawi farxad leh.